११ वर्ष सम्म नबनेको पुल १ वर्षमा बन्ला त ? – Karnalipati
११ वर्ष सम्म नबनेको पुल १ वर्षमा बन्ला त ?
कर्णाल‍ीपाटी । २७ भाद्र २०७७, शनिबार मा प्रकाशित
कालीकोटः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ७ वर्ष पछि खुलालु पुलको अनुगमन गरेका छन् ।
लामोसमयदेखि निमार्णाधिन खुलालु पुलको मुख्यमन्त्री शाहीले ७ वर्ष पछि अनुगमन गरेका हुन् । २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा कालीकोट जिल्लाबाट निर्वाचित भएर उर्जामन्त्री बनेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही २०७४ सालको निर्वाचनमा कालीकोट प्रदेशसभा ख बाट प्रदेश साँसदमा निर्वाचित भएर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उक्त पुलको अनुगमन गरेपछि अव पुलले तिव्रता पाउनेमा स्थानीयबासीले विश्वास लिएका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अनुगमनकै क्रममा पुललाई चाडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले आगामी असारसम्म काम सम्पन्न नगरे पुन अर्को टेन्डर गर्ने भन्दै निमार्ण कम्पनीलाई ताकेता गरेका हुन् ।
आगामी असार भित्र आफुले पुल संचालनमा ल्याईसक्ने कन्काई नेपाल प्रगति जेविका संचालक दिपक मैनालीले बताए । उनले अहिले लकडाउन भएकाले सामाना ल्याउन असहज भएकाले काममा तिव्रता दिन नसकेको स्विकार गरे । उनले भने मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशन अनुसार आगामी असार भित्र पुल संचालनमा ल्याइसक्ने र्छौ । यसमा सवैको साथ आवश्यक छ । ११ वर्ष सम्म नबनेको पुल १ वर्षमा बन्ला त ?